Waraysi: Maraykanka iyo Tarxiilka - BBC News Somali
Waraysi: Maraykanka iyo Tarxiilka
Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Jeff Sessions, ayaa ku hanjabay in dhaqaalaha la siiyo laga joojin doono magaalooyinka dalkaas ku yaal ee qariya dadka soo galootiga bilaa sharciga ah ee falal dambiyeedka gala.
Isagoo ka hadlayey Aqalka Cad ayuu sheegay in wasaaradda caddaaladda Maraykanku ay dhaqaalaha ay ka helaan xukuumadda federaalka ah waayi doonaan hadii ay si buuxda u dhaqan gelin waayaan sharciyada cusub ee socdaalka.
Wuxuu intaa ku daray in hadii aan la tarxiilin dadka bilaa sharciga ah ee dambiyada galay ay khatar ku noqon doonaan bulshada Maraykanka.
Hadaba Weriyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen ayaa hanjabaaddan xeer ilaaliyaha guud iyo magaalooyinka arrimahan lagu tuhmayo kuwa ay yihiin ka waraystay Amiin Haaruun oo ah qareen deggan magaalada Minneapolis.
Maqal Wadada isku xirta deegaanada Soomaalida iyo Adisababa ayaa xiran maalintii saddexaad
Wadada isku xirta deegaanada Soomaalida iyo Adisababa ayaa xiran maalintii saddexaad
Maqal Maxaa saameyn ah uu leeyahay qabowga darran ee ka jira Yurub iyo Mareykanka?
Maxaa saameyn ah uu leeyahay qabowga darran ee ka jira Yurub iyo Mareykanka?
Maqal Abwaan da'yar oo gabayadiisa diirrada ku saara dhaqanka bulshada Soomaalida
Abwaan da'yar oo gabayadiisa diirrada ku saara dhaqanka bulshada Soomaalida
Maqal Barayaasha Jaamacaddaha Sudan oo dalbaday dibadbaxyo dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda
Barayaasha Jaamacaddaha Sudan oo dalbaday dibadbaxyo dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda
Maqal Qabow aad u darran oo saameeyay nolosha Soomaalida ku nool Mareykanka
Qabow aad u darran oo saameeyay nolosha Soomaalida ku nool Mareykanka
Maqal Cudurka Autisim-ka oo dhibaato ku haya soomaalida ku nool Minnesota
Cudurka Autisim-ka oo dhibaato ku haya soomaalida ku nool Minnesota